Maxay Ahayd Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Antonio Conte Ku Diiday Shaqada Real Madrid Markii La Eryay Julen Lopetegui? Conte Laftiisa Ayaa Ka Jawaabaya. - Latest football news
Maxay Ahayd Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Antonio Conte Ku Diiday Shaqada Real Madrid Markii La Eryay Julen Lopetegui? Conte Laftiisa Ayaa Ka Jawaabaya.
Maamulka kooxda Real Madrid ayaa horaantii xili ciyaareedkan isku dayay in ay Antonio Conte ka dhigtaan badalkii tababarihii shaqada Bernabeu laga caydhiyay ee Julen Lopetegui ka hor intii ayna Santiago Solari u magacaabin shaqada uu hadda Real Madrid ka hayo laakiin Conte ayaa markaas iska diiday in uu shaqada Los Blancos kala wareego Julen Lopetegui.
Antonio Conte ayaa sheegay in shaqada kooxda Real Madrid ay markaas ahayd sidii baradho kulul oo kale wuxuuna ku dooday in aanu isagu jeclayn in uu kooxaha la wareego kala badhka xili ciyaareedka, laakiin waxa uu qiray in uu iska diiday fursada uu Bernabeu ku maamuli lahaa.
Antonio Conte ayaa sidoo kale wax laga waydiiyay haddii uu la wareegi doono kooxda Inter Milan oo muddo dheer lala xidhiidhinayay.
Antonio Conte oo ka hadlaya sababtii uu shaqada Real Madrid u diiday ayaa yidhi: “Shaqada Real Madrid waxay waqtigaas ahayd baradho kulul.Waxaan ka fikiray in ay ahayd midka fiican in aanan u tagin. Waxaa jirtay suurtogalnio, laakiin anigu ma jecli in aan kooxaha imaado kala badhka xili ciyaareedka waxaan door bidaa in aan bilawga ka shaqeeyo”.
Iyada oo Antoni Conte lala xidhiidhinayo kooxaha Inter Milan iyo Roma ayuu wargayska La Gazzetta dello Sport macalinkii hore ee Chelsea ee Antonio Conte uu waydiiyay haddii uu kooxahan qaban karo.
Antonio Conte oo ka jawaabaya su’aasha wararka Inter Milan iyo Roma ayaa yidhi: “Ilaa xagaaga, aniga meelna iguma arki doontaan, tani waa hubaal. Tixgalina Inter, dadku waqti dheer ayay tan ka soo hadlayeen, laakiin kaliya waa warar xan ah oo kaliya”.